I-China 12-16 Years Old Sleeve Boy T-Shirt PY-TC003 Ukukhiqiza nefektri | I-Pinyang
Isikibha somfana oneminyaka engu-12-16 ubudala
1. Luhlobo luni lwesikibha esifanele abafana abancane?
Ezinganeni, izingubo ezinemibala ehlukahlukene zifaneleke kakhulu kubo - ukukhanya kwelanga nobuhle yizinsiza ezijwayelekile zezingane. Sonke siyawuthanda umoya omsulwa nothando wezingane, ngakho-ke izingane azikhethi umbala wezingubo. Uma "bejwayelekile" ngombala owodwa lapho besebancane, bazolahlekelwa yiphupho labo elimibalabala. Badinga isikibha esinobungane nesimfashini, lokhu kubunjwa kwendwangu kuyindwangu emhlophe kakotini, izingane zivame ukujuluka lapho zidlala, khona-ke ukotini omsulwa uyindwangu yokumunca umjuluko ongcono kakhulu, izingane zigqoka zikhululekile futhi zingavinjelwe.
2 、 Ziyini izinzuzo zezikibha ezinemishwe?
Isikibha esimhlophe silula futhi senza izinto ezihlukahlukene, kulula ukufanisa nemibala ehlukahlukene yezingubo, kulula kakhulu ukukhanya, ngakho-ke ehlobo kuthandwa kakhulu ngabafana nomama abancane. Isibonelo, lesi sikibha esimhlophe silula futhi asijwayelekile, ngomklamo wephethini wokugwinya othakazelisayo ohlangothini, okwenza sonke isikibha siguquguquke, sibe lula futhi sibe semfashinini.
Lesi sikibha esimhlophe sakhiwe ngendlela engafanele ohlangothini. Umklamo wokusika we-trapezoidal wenza sonke isikibha sibonakale sihluke kakhulu futhi sihle. Lesi sikibha esilula futhi esiyingqayizivele singakhombisa kalula ubuntu bemfashini yezingane ehlobo.
Isikibha esimthende esimhlophe, isikibha esimhlophe esinokwakhiwa kwephethini yemigqa yakudala, bese kuthi ngomklamo othokozisayo, isikibha esinje kunesikibha esimhlophe esilula ukunambitheka okuthe xaxa nobuciko, imfashini nokujabulisa.
Ukusetshenziswa komkhiqizo: okokugqoka kweqembu, ukwenza ngezifiso komuntu siqu, njll., kungenza ngokwezifiso umbala, iphethini, ilogo.
Q: Ingabe ungumkhiqizi noma inkampani yezohwebo?
A: Singabakhiqizi bokuqala kanye ne-wholesaler eqondile enolwazi lweminyaka emi-5.
Q: Iyini imikhiqizo yakho eyinhloko?
A: Singabakhiqizi bezingubo zokuluka zezingane, imikhiqizo yethu eyinhloko amaT-shirts, amabhulukwe, izikhindi, amasiketi, ubobo, amajakethi, amasudi ezingane ezineminyaka engu-0 ~ 10.
Q: Iyini ikhwalithi yemikhiqizo yakho?
A: Samukele izindwangu zekhwalithi enhle ne-Eco-friendly, ephefumula futhi ikhululekile, ilungele isikhumba sezingane .Imikhiqizo yethu idlulise isivivinyo se-SGS yengubo.
Q: Kungani amanani akho ephansi kunabanye abahlinzeki?
A: Sicela wazi ukuthi singumkhiqizi wokuqala kanye nomthengisi oqondile ngqo, ngakho amanani ethu aphansi.
Imikhiqizo yethu ikhwalithi efanayo ngentengo ephansi, intengo efanayo nekhwalithi engcono.
Q: Ngingaba nayo i-logo yami kumikhiqizo?
A: Yebo, ungaba nelogo kumikhiqizo. I-MOQ ingama-50pcs / idizayini. sicela uxhumane nathi uma ama-oda wangokwezifiso.
Q: Yisiphi isikhathi sokuhola?
IMP: Uma i-oda imiklamo yamanje, ikulungele ukuthumela .amaphasela azothunyelwa zingakapheli izinsuku eziyi-7 ngemuva kokuthola irisidi .Isikhathi sokulethwa sincike kuliphi izwe
Uma isevisi yangokwezifiso, isikhathi sokulethwa esithile sincike ezintweni nobuningi be-oda lakho.
Q: Ungazixazulula kanjani izinkinga zekhwalithi ngemuva kokuthengisa?
A: Thatha izithombe zezinkinga bese uzithumela kithi. Sizokwenzela isisombululo esanelisiwe kungakapheli amahora angama-24 ngemuva kokuqinisekisa izinkinga.
Langaphambilini Ama-White Babies Track Suits PY-YR002
Olandelayo: Amaphethini enziwa ngezifiso ihembe lemikhono emide yomfana i-PY-TC001
I-100% Ukotini Omfishane Womfana Isikibha se-PY-TD002
I-Crew Neck Short Sleeve Boy T-Shirt PY-TD001
Intwasahlobo Nokuwa Kwemikhono Emide Yomfana T-Shirt PY-TC002
I-Hot Sell Long Sleeve Boy T-Shirt PY-TC004
Amaphethini ngezifiso Long sleeve se Boy Boy T-Shirt P ...